दैवको यो कस्तो नियती ! बिहे गरेको एक घण्टा नबित्दै भयो दुलाहाको मृत्यु !
काठमाडौं, २८ भदौं । विवाह गरेको केहि दिनमा वा केहि महिनामा श्रीमान श्रीमतीमध्ये एक जना स्वर्गबास भएको खबर त हामीले सुन्दै आइरहेका छौं । तर बेलायतमा एउटा यस्तो दुखद घटना घटेको छ कि त्यो सुन्दा मात्रै पनि मुटु ढुक -ढुक हुन्छ ।
बेलायतकी एक युवतीले गत शुक्रबार बिहे गरेको केही घण्टामै पति वियोग सहनु परेको छ । वेस्ट योर्कसायरनिवासी ३७ वर्षीया क्लेरले यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण नियति भोगेकी हुन् ।
क्लेर र इम्सलेले परिवारका सदस्य तथा इस्टमित्रको उपस्थितिमा एउटा होटलमा भब्य बिहे गरे । बिहेपछि आयोजना भएको पार्टीमा दुवै सहभागी भए । राति साढे ११ बजेतिर ड्यानीले ‘निन्द्रा लाग्यो, सुत्न जान्छु’ भने । क्लेरले ‘म चाहिँ एकछिन यहीँ बस्छु’ भनिन् । एक घण्टापछि क्लेर कोठामा जाँदा ड्यानी सुतिरहेका थिए ।
केही भलाकुसारी गरी पुनः पार्टीमा सहभागी हुन भनेर उनी फर्किन् । एक घण्टापछि कोठामा जाँदा श्रीमानलाई अचेत अवस्थामा पाइन् । चिकित्सकलाई खबर गरियो । ड्यानीलाई मृत घोषित गरियो ।
यसबारे क्लेरले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘गएको शुक्रबार मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दिन थियो । मैले एक जना इमानदार, फरासिला, मनकारी र मलाई औधी माया गर्ने व्यक्तिसँग बिहे गरें । त्यस्तो रमाइलो दिन मैले कहिल्यै भोगेकी थिइनँ । तर, त्यही रात मैले श्रीमानलाई गुमाउनु पर्‍यो ।’ अनुसन्धानपछि प्रहरीले ड्यानीको मृत्यु कालगतिले भएको बताएका छन् । -एजेन्सी